Coronavirus: waa joogsi shaqo haddii aad ugu dhowdahay qof nugul
Waxaa jiray hakad shaqo si loo daryeelo carruurta iskuulka lagala noqday, shaqaaluhu hadda waxay haystaan ​​suurtogalnimada inay ka faa'iideystaan ​​joogsiga shaqada (fasax jirro) haddii ay la noolaadaan qof nugul. Jawaab macquul ah oo ku aaddan xakamaynta: Illaa iyo hadda, kuwa aan shaqeyn karin waxay qaadanayeen khatar weyn iyagoo isu muujiyay inay yihiin kuwa gudbiya fayraska dadka nugul ee ay la nool yihiin.
Looma baahna, hadda, in lala xaajoodo loo shaqeeyaha, aagga cawlan ee joojinta shaqada ee shaqaalaha "lagama maarmaanka ah" ee la nool dadka nugul hadda waa la tirtiray.
Fasaxa jirada waxaa lagu helaa iyadoo laga codsado dhakhtarkaaga. Haddii aysan suurtagal ahayn in lala tashado, qaasatan sababta oo ah kuma tababbaran doonin taleefoonka, tusaale ahaan, waxaad ka heli kartaa dhakhtarka magaalada. Si kastaba ha noqotee, Caymiska Caafimaadka ma uusan cadeynin in fasax jirro oo la fududeeyay, sida loogu talagalay dadka nugul laftiisa, in la fulinayo.
Mudo intee le'eg ayay joogsiga shaqadu shaqeynayaa?
Joojinta shaqada ee loogu talagalay shaqaalaha la nool dadka nugul waa muddo dhan 15
Coronavirus: waa joogsi shaqo haddii aad ugu dhowdahay qof nugul July 10th, 2021Tranquillus
horeShaqaalaha naafada ah: qodobbo cusub oo ku saabsan adeegga bulshada
socdaCoronavirus: Caawiyayaasha guryaha waa inay shaqeeyaan? Maxaa caawimaad ah iyaga?
Ku guuleysiga maalgashiga guryaha ee 8 + 1 Talaabooyin
Baro eexda garashada
Abuur liistada hoos-u-dhaca ee 'Excel'
Koontada tababarka shaqsiyeed (CPF): ogow xuquuqdaada